सवारी चालक अनुमति पत्रमा नयाँ व्यवस्था – ramechhapkhabar.com
कोरोनाका कारण लामो समय चालक अनुमतिपत्र रोकिँदा सेवाग्राहीको भीड बढेर गएको छ भने सवारी चालक अनुमतिपत्र लिनका लागि हुने भीड र अव्यवस्थित सेवा प्रणालीले गर्दा बिचौलीया हावी हँुदा सेवाग्राहीले सास्ती बेहोर्नु परेको छ ।
विभागले प्रस्ताव गरेको कार्यविधि निर्देशिका संशोधनको दफामा मन्त्रालयले सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरेसँगै आगामी ३ महिनाभित्र नयाँ चालक अनुमतिपत्र मापदण्ड लागू हुने विभागका निर्देशक डा. लोकनाथ भुषाल बताउँछन् । “योसँगै नयाँ मापदण्डले सवारी अनुमतिपत्रमा मौलाएको बिचौलिया विकृति हट्ने, सेवाग्राहीले सहज सेवा पाउने र यातायात क्षेत्रको समस्या हट्ने छ,” डा. भुषालले भने, “नयाँ मापदण्डअनुसार सबै वर्गको सवारी अनुमतिपत्र लिनेलाई यो नियम लागू हुनेछ । उनकाअनुसार, यो प्रणालीअनुसार कमै परीक्षार्थी अनुत्र्तीण हुने र पास नभएका परीक्षार्थी अर्काे पटकको परीक्षामा उत्तीर्ण हुन सक्नेछन् । नयाँ मापदण्डबारे जानकारी गराउन र परीक्षा सञ्चालन गर्न मातहतका कार्यालय र सम्बद्ध कर्मचारीलाई प्रशिक्षण दिने कार्यक्रम पनि विभागले राखेको छ ।